R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts
zvoseVatambi veBasketballMabhirioniMabhokisiComediansVanachirembaGorufuHollywood nyeredziVatapi venhauMedia HunhuAkasanganiswa Maartist
Brodie Lee Utano Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kamala Harris Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Bhiri reCosby reChikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi
Nick Cannon Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Keanu Reeves Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kaycee Madu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Jim Carrey Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Sophie Gregoire Trudeau Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi
zvosevatambiVatambiFomura Imwe DhiraivhaGorufuVakakurumbira vepaInternetVatapi venhauPoliticiansSingers
Mehdi Hasan Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Christiane Amanpour Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Richard Kuda Mwana WeChidiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Chiwetel Ejiofor Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Antoine Dupont Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Dominic Thiem Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Alistair Overeem Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Joan Mir Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Mufudzi Bushiri Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Don Jazzy Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Jennie Kim Kukura Kwemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Xi Jinping Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Khabib Nurmagomedov Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Lalisa Manoban Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Ashleigh Barty Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Ruby Rose Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Chris Hemsworth Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Kylie Minogue Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
David Warner Zvekurera Nyaya Yechidiki uye Untold Biography Chokwadi
Luis Ortiz Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Canelo Alvarez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Singers R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeAmerican Music Legend inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita “Kells". Redu R Kelly Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inokuunzai nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwake. Zvimwe zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe yevanotengesa mumhanzi vanyori venguva dzose. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga R.Kelly's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Robert Sylvester Kelly akazvarwa musi we 8th waJanuary 1967 kuChicago, Illinois, United States. Akanga ari wechitatu yevana 4 vakazvarwa naamai vake, Joanne Kelly uye kuna baba vake Kelly.
Nyika yeAmerica yerudzi rwevatema nemidzi yeAfro-America inouya kubva kumhuri yepasi yemhuri uye aive asina-ruoko akasimudzwa naamai vake Joanne kuIda B. Wells Homes yeruzhinji dzimba purojekiti muChicago yeBronzevilleville nharaunda. Kelly haana kumbobvira ave nababa muhupenyu hwake nekuda kwekuti baba vake vaive vasipo zvachose kubva pahupenyu hwake hwepakutanga, hudiki uye kuyaruka.
Ida B. Wells Homes dzimba dzeveruzhinji chirongwa uko Kelly akarererwa.
Kelly akakurira muChicago pamwe chete nehanzvadzi dzake dzakwegura, Theresa, Bruce pamwe nehanzvadzi yake Carey. Kukura semwana, Kelly aida kuenda naamai vake kuchechi uye pasina nguva akatanga rwiyo rwenzira yekereke paakanga akwegura 8.
Yaiva panguva yakafanana iyo Kelly akabatwa zvepabonde neA18-year-old woman. Ikozvino mwana asina mwana ainyanya kutya uye akanyara kutaura kune ani zvake. Somugumisiro, aigara achishungurudzwa kusvikira aive akwegura 14.
Ari kure nekushungurudzwa pabonde, Kelly ane makore gumi nerimwe ekuberekwa akabatwa nemhirizhonga yakapararira muChicago mushure mekunge apfurwa papfudzi nechikwata paakakwira bhasikoro rake kuenda kumba. Chikwata chakaba bhasikoro raKelly richimusiya achifira mudziva rake reropa. Kelly akapona pakurwiswa uye akatangazve chikoro nguva pfupi yapfuura.
R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Kudzidziswa kwaKelly kunosanganisira zvidzidzo zvake paKenwood Academy muChicago muHyde Park. Ndichiri kuKenwood Academy, Kelly akabatanidza vadzidzi nekutamba basketball yetimu yechikoro chesekondari.
Rare pikicha ya R. Kelly nenhengo dzechikoro chesekondari timu yebhasikiti.
Chaive pachikoro chimwe chete icho mudzidzisi waKelly wechikoro chesekondari, Lena McLin akaziva tarenda rake remimhanzi uye akamukurudzira kuti atarise kuimba. Nekudaro, Kelly anga asingadi kukanda basketball yechikoro chepamusoro kumimhanzi kudzamara apinda muchirongwa chetarenda kwaakafadza nekuimba Stevie Wonder classic, "Ribhoni mudenga". Yakanga iri mushure mekuita uko Kelly akaziva kuti aifanirwa kuve muimbi.
Mudzidzisi wemimhanzi waR Kelly, Lena McLin akamukurudzira kuti atarise pamimhanzi.
Naizvozvo, Kelly akaisa parutivi zvaaifarira mu basketball uye akashandira kuvaka basa remumhanzi. Akakurumidza kusiya chikoro chesekondari ndokutanga kutamba mumigwagwa pasi peChicago Transportation Authority "L" makwara.
VERENGA Charlie Puth Mwana Wechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts
R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Panguva Kelly yaakange ave nemakore makumi maviri nemaviri, akaumba rake rekutanga boka remimhanzi MGM (Musically Gifted Men) mu22.Boka iro rakabatanidzwa pamwe neshamwari dzake Marc McWilliams, Vincent Walker naShawn vakapinda mu tarenda TV show Big Break, yakaitirwa NaNatalie Cole. MGM yakarova makwikwi kubva kune vamwe vatori vechikamu kuhwina mubairo weUS $ 1990 mubairo mukuru.
R. Kelly neboka rake remimhanzi MGM akahwina tarenda terevhizheni showa Big Break, inogarwa naNatalie Cole mu1989.
Shure kwaizvozvo, MGM yakanyora uye yakasunungura imwe chete 'Sei Unoda kunditamba' vasati vapararira mu1991. Nguva pfupi mushure mekuparadzaniswa Kelly akanyoreswa kuJive Records uye akabatana neboka idzva kubva kuChicago rainzi Public Announcement.
R. Kelly neboka reChiziviso cheVoruzhinji.
R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts: Road To Fame
Kwakazotevera Musical endeavers akaona Kelly achitora nhanho padhuze nembiri nekuburitswa kwake kwekutanga dambarefu 'Akazvarwa muma 90's' muna 1992. Iyo albha iyo yaive nePublic Announcement Group sevaimbi vayo vekusimudzira yaive neinonakidza yeR&B uye yakapihwa platinamu.
R. Kelly 'Akazvarwa mumakumi mapfumbamwe' ekutanga album kavha.
Kelly akazo pinda mumimhanzi yekushanya neruzhinji Chiziviso asati aparadzana neboka muna 1993. Kupatsanurana kwakamugonesa kuti ashande pane yake yekutanga solo album "12 Play", yakaburitswa munaNovember 9 gore iro uye ikazove yakabudirira. pane 'Akazvarwa muma90's'.
R. Kelly Vana Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Kutevera kubudirira kwe "12 Play", Kelly akazove anonyanya kutsvakwa munyori wenziyo uye mugadziri ane mabasa ekunyora akachengetedzwa naAaliyah kune dzese nziyo dzealbum yake "Age Haisi Chinhu Asi Nhamba". Uye zvakare, Kelly akagadziridza nziyo dzevamwe maartist vakaita saBarry White naToni Braxton. Akapihwa mbiri yekunyora Rwiyo rwaMichael Jackson rwekuti "Hausi wega" mugore ra1995, chiitiko chakamupa kusarudzwa kweGrammy.
R. Kelly akawana mazita maviri eGrammy muna 1995 ekunyora, kugadzira nekunyora nhamba yekupedzisira yaMichael Jackson inonzi "Hausi wega".
1995 raive gore iro R-Kelly akaburitsa rake rekutanga-rine zita rekuti, 'R. Kelly '. Kunyangwe hazvo dambarefu raive nenziyo dzakabudirira rakange risingabudirire mune zvekutengeserana sezvo rwiyo rwe “R” rwakaburitswa makore matatu gare gare muna 3. “R”, iro rinoramba riri dambarefu raKelly rinotengesa zvakanyanya rakagashira wongororo dzakajeka uye rakawana mibairo yeKelly 1998 Grammy yenziyo yakanyanya "Ndinotenda Ndinogona Kubhururuka".
R. Kelly "R" dambarefu rine nziyo dzakarova senge "Ndinotenda Ndinogona Kubhururuka" iyo yakamutorera 3 Grammy mibairo.
Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
R-Kelly akaroora kaviri. Tinokuendesa mashoko pamusoro pekufambidzana kwake, mararamiro akakundikana, ikozvino hukama hwehukama uye zvinonzi s3xual kushandiswa. Kutanga, Kelly akanga akwegura kare 8 paakava nemusikana wake wekutanga ainzi Lulu. Vaya vadiki vaduku vakaparadzaniswa mushure mokunge Lulu akadzikira mumvura uye akawanikwa asina upenyu pasi.
R. Kelly aive nemakore 8 ekuberekwa paakange aine musikana wake wekutanga.
Mukati mebasa rake rekuvaka, Kelly akafambidzana nevakadzi vakawanda asati aroorwa muchivande nemuimbi wekuAmerica anonoka Aaliyah muna 1994. Kuroora kwaKelly naAaliyah kwaizozoita nyonganiso nekuda kwekuti muimbi wekupedzisira aive asina makore gumi nemashanu- akwegura panguva iyoyo. Muchato wevaviri wakabviswa nemhuri yaAaliyah muna 15.
VERENGA Billie Eilish Yevechidiki Nhau uye Untold Biography Chokwadi
R. Kelly akaroora muchivande kuna Aaliyah paakanga akura 15.
Kelly akazotevera akaroora Andrea Lee mu1996. Vasati varoora Andrea aive muimbi wekuchengetedza waKelly uye aibva pazviratidzo zvese asina kubviswa. Imba yavo yakakomborerwa nevana vatatu Joanne (akazvarwa mu1998), Jaya (akazvarwa mu2000) naRobert, Jr. (akazvarwa mu2002) vasati vaparadzaniswa mu2009.
R. Kelly akange akaroora mukadzi wake wechipiri Andrea pakati pe1996-2009.
S3xual kusaita zvakanaka:
Mukati menguva yekuroora kwaKelly naAndrea, muimbi akapomerwa mhosva gumi nemana dzekushungurudzwa kwevanhukadzi nevasikana. Kunyange zvakadaro haana kuwanikwa aine mhosva yekuzvibata kunofungidzirwa nedare redzimhosva reChicago muna 14. Kunyange zvakadaro, kuregererwa hakuna kupedzisa kupomerwa kwekushungurudzwa kwevanhukadzi kwakaitwa Kelly.
Uyu mufananidzo weDare wakagadzirwa muna2008. Inoratidza R. Kelly achiteerera kumuchuchisi wechapupu achichema.
Aive mu2017 achipomerwa kubata vanasikana vevabereki vatatu muchinamato chinoshungurudza nepo waaimboshanda naye akamupomera mhosva yekumutapura nechirwere chepabonde. Pamusoro pezvirevo zvevaratidziri ava vakapaza nzvimbo dzekutamba dzeKelly konzati / matambiro, rekodhi rekodhi yake yakazviparadzanisa naye kubva apo masevhisi ekuparadzira masevhisi seSpotify akamira kusimudzira mimhanzi yaKelly pachikuva chavo.
Zvinopomerwa s3xual kushungurudzwa zvakazosvika pakureba kwazvo muna 2019 segwaro rakanzi "Surviving R. Kelly" rakaburitsa pachena hunhu husina kunaka hwepabonde kubva kune vakabatwa naKelly vanonzi vakashungurudzwa pabonde.
Kupona R. Kelly chinyorwa chakatanga kuratidzwa muna 2019. Inoratidza humbowo kubva kune vanonzi vakapona mukubatwa chibharo kwaKelly nevaya vari mukati medenderedzwa remuimbi weR & B.
Kelly anoenderera mberi kuramba nharo, chiitiko chakakonzera mararamiro paukama hwake nemhuri yemhuri yake iri kuderedza ukama naye. Muchiedza chimwe chete, Mwanasikana wavo mukuru Joann Kelly zvino anotaura se Buku Buku uye akatora ku Instagram kunotsanangura baba vake semhuka.
Mwanasikana wekutanga waR Kelly anocheka hukama nababa vake vachirondedzera sechikara mune refu posvo pa Instagram.
Mukupomerwa kwezvinopomerwa izvi, Kelly ava kusina murume panguva ino. Ukama hwake hwekupedzisira uye hwakakomba hwakanga huine mufananidzo wemakore we19, Halle Calhoun. Halle akachekawo kushamwaridzana nemuimbi uye haadi kufambidzana naye.
Hukama hwapfuura hwaKelly hwaive nemuenzaniso Halle Calhoun.
R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
R-kelly akaberekerwa mumhuri yepamusoro yekirasi ye5. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve baba vaR-Kelly: Chinyanyo kuzivikanwa pamusoro pababa vaKelly avo vaive vasipo pahupenyu hwaKelly hwepakutanga. Kana iye haana kuuya zvichitevera kukwidziridzwa kwaKelly mukurumbira uye mhuri haitaure nezvake kuvatori venhau.
Nezve amai vaR Kelly: Joanne ndiamai vaKelly. Aive muimbi akarera Kelly saamai vasina murume uye aigara achimuendesa kuchechi yeBaptist uko Kelly akatanga kuimba. Kelly aive padyo zvakanyanya naamai vake kusvika paakafa nekenza muna 1993. Mushure mekufa kwake, Kelly akatumidza mwanasikana wake wekutanga Joanne kuti aremekedze ndangariro dzaamai vake vanonoka.
R. Kelly naamai vake Joanne.
Nezve R. Kelly's Siblings: R-Kelly akakurira nevanin'ina vake Theresa, Bruce uye Carey. Zvishoma zvaizivikanwa pamusoro Theresa kusvika pakupera kwa2018 apo munin'ina waR-Kelly Carey akaburitsa pachena kuti ivo (Carey & Kelly) vese vakashungurudzwa pabonde naTheresa.
Theresa anonzi akashungurudza hama dzake Kelly naCarey.
Bruce ihama yaKelly yakazvarwa muna 1965. Bruce anogara kuChicago uye ndibaba vevana vaviri.
R. Kelly mukoma Bruce Kelly.
Pakupedzisira asi kwete kwete zvishoma Carey (akazvarwa muna 1971). Ndiye wekupedzisira nhengo yemhuri yaKelly uye ane vana vatanhatu.
VERENGA Bruno Mars Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi
R. Kelly nemunun'una wake Carey.
Nezve hama dzaR Kelly. Kelly achiri kutaurirana nezvehukama hwake. Hapana kana akaedza kuita kuti azive nemuimbi mushure mekutaura kwekuita kwekuita kwepabonde kwakasvibiswa kune muimbi.
R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Chii chinoita kuti R. Kelly akanganise? gara shure apo isu tichikuunzira maitiro ehupenyu hwake kuti akubatsire kuva nemufananidzo wakazara wake. Kutanga, nguva yake ndeye mutsara weSFP (Extraversion (E), Kuziva (S), kunzwa (F), uye Kuziva (P)) zviito. Ari kusununguka, hutano, huripo uye hunofananidzira pachake nemanzwiro akawanda.
Kelly Anozviratidza nemanzwiro akawanda kudaro.
Muimbi wacho anonzwisisa zvinyorwa zvese pamaoko maviri. Zvido zvake zvinosanganisira kutamba uye kuenda kumitambo yeBasball, kunyanya muzvikoro zvepamusoro uye mumatare emumigwagwa ari kune vasikana vaduku.
R. Kelly ane maTatoo pamaoko maviri.
R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts: Lifestyle
Nhamba yeR R.kelly yakakosha inotyisa kubva kune nguva yose yakakwirira ye $ 150 mamiriyoni kusvika kungodarika $ 1 mamiriyoni. Haasi kwete kuvhiringidzika kwepamutemo uye mhosva dzisina kufanira, kubuda ropa pamativi ose. Muimbi wacho haana kukwanisa kutengesa matikiti emakwikwi ake uye haaiti mari kubva pane zvaakamboita. Kelly akasimbisa matambudziko ake emari mumutsva wake wekupedzisira, "Ndinobvuma" nokuzarura kuti haasisina imba yega uye anoda chaizvo kutarisa kuti atore mari yekubhadhara imba.
R. Kelly atyoka uye achiri kuenderera kuti arasikirwe nemari.
Akabvumawo kubhadhara IRS zvakakwana se $ 20 mamiriyoni, rubatsiro runomusunga kuti agamuchire zvibvumirano kubva pane zvinyorwa zvake. Kelly anoenderera mberi kunetseka mune zvemari uye anorarama hupenyu hwomudzidzi wezasi. Munguva pfupi yapfuura Kelly akavharirwa nokuda kwemari yaaimbova mudzimai wake Andrea rubatsiro rwevana. Angadai akagara ari mujeri kana munhu asingazivikanwi aibhadhara akanga asina kubhadhara chikwereti chake kusvika $ 161,000.
R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts: Untold Facts
R. Kelly akarovera Bhizinesi reUnited basket yeUnited States Basketball League yeAlantic City Seagulls pakati pe1997-1999.
R. Kelly achitamba nyanzvi ye basketball kuAtlantic City Seagulls mukunopera kwema1990.
Kelly haaizoimba rwiyo rwake rukuru rwekuti "Ndinotenda kuti Ndinogona Kuramba," kana NBA nyanzvi Michael Jordan akanga asina kumubvunza kunyora rwiyo rwefirimu 1996, Space Jam. Icho ndicho chikumbiro icho chakabereka "Ini Ndinotenda Kuti Ndinogona Kuramba".
"Ini ndinotenda ndinogona kubhururuka" yakafemerwa neanoratidzira bhaisikopo Space Jam inotamba NBA ngano Micheal Jordan.
Nezve chitendero chake, R. Kelly muKristu uye anonamata kuchechi yeBaptist. Kunyanya zvakadaro, mazita emamwe enzira dzake anodanidzira chitendero, anosanganisira "Denga, Ini Ndinoda Kumbundirwa," "Shanduko Yemunamato," "Chitendero," "Mweya" pakati pevamwe.
Kazhinji pikicha yaR Kelly achigamuchira minamato uye kununurwa muchechi.
R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts: Video Summary
Ndapota ona pasi apa, chidimbu chemuvhidhiyo cheYurovheni cheporofita iyi. Nomutsa kushanya uye NZIRAI kwatiri Youtube Channel kune mamwe mavhidhiyo.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu R Kelly Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Childhood Biography Diary- yeMA MALE AMERICAN SINGERS
Ruka Anobatanidza Nyaya dzeUcheche Plus Untold Biography Chokwadi
DaBaby Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Roddy Ricch Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Wese akakosha manhamba akawana zvese zveUdiki Nhau uye Bio Chokwadi. Ichi chikonzero nei isu tiripo. Isu tinonyora tichiita nyaya dzehupenyu dzinopa nzwisiso huru muhudiki kupa hupenyu hwevakakurumbira pasi rese.
Justin Bieber Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Cardi B Kukura Kwemunhu Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Kenny Rogers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Dr Dre Zvekuita Nyaya Yevacheche Plus Untold Biography Chokwadi
Snoop Imbwa Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi